Ny Ankizy No Mizaka Ny Vokatry ny Ady Ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Ny Ankizy No Mizaka Ny Vokatry ny Ady Ao Gaza
Voadika ny 20 Novambra 2012 15:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, srpski, English
Mahavaky fo ny mahita ny sarin'ireo ankizy Palestiniana namoy ainy izay niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao sosialy androany, ho fanaraina ny saina manoloana ny voina miseho amin'izao fotoana izao ao Gaza, satria mbola manohy mifampitifitra foana i Isiraely sy ny Hamas.
Androany no andro fahadimy hatramin'ny fandarohana baomba nataon'i Isiraely ao Gaza isan'ora, nilatsaka tao an-tranon'olo-tsotra tao Gaza ny balafomangan'i Isiraely, ka namoizana ain'olona 10 farafahakeliny, ankizy kely ny dimy tamin'izany. Tao amin'ny aterineto, nananameloka ny zava-nitranga ny mpiserasera noho izany voina niseho izany.
Avy ao Gaza, Rana nisioka hoe:
@RanaGaza: Olona 9 no namoy ny ainy tao amin'ny fianakaviana Al-Dalou, ankizy kely avokoa ny 5 tamin'izany, noho ny filatsahana balafomanga tao amin'ny trano fonenan'ilay fianakaviana. #Gaza #AlDaluMassacre
Rezaa Kasu, mpanao gazety antserasera ao amiin'ny Al Jazeera, nanampy hoe:
@rezakasu: Dokotera ao #Gaza: Olona maherin'ny 660 no naratra / ankizy ny 224 / vehivavy kosa ny 113 & olona antitra 50
Mpitati-baovao ao amin'ny CNN Arwa Damon, izay ao Gaza, nanambara hoe:
@arwaCNN: nilaza ny minisitry ny fahasalamana ao #gaza fa olona 65 no namoy ny ainy tao #gaza nanomboka tamin'ny Alarobia, zaza amam-behivavy avokoa ny 50% n'izy ireo
Taminà sioka hafa, hoy izy nanazava:
@arwaCNN: tonga tao #gaza…nandeha nijery ny zava-nitranga, nahita ankizy 2, vata mangatsiaka ana zazakely vao 2 volana sy ramatoa efa lehibe no nalaina tao anaty korontan-trano rava …
Nanazava toy izao kosa i Jenan Moussa:
@jenanmoussa: Tokony hanana fahamendrehana ara-tsaina ny tsirairay mba hanameloka izao. Olona 10 farafahakeliny – zaza ny dimy tamin'izany -no namoy ny ainy tamin'ny fanafihanà trano iray tao #Gaza.
Rana tao Gaza nilaza momba ny lohatenim-baovao Isiraeliana ary namaly izany:
@RanaGaza: Isiraely: “Miezaka izahay mba tsy hikendry ireo olo-tsotra.” Izany no antony mahatonga ireo ankizy maherin'ny 24 namoy ny ainy nanomboka tamin'ny Alarobia. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4307940,00.html … #Gaza
Iyad El-Baghdadi nanampy hoe:
@iyad_elbaghdadi: Ny zava-mahavariana ankehitriny dia hampiasain'i Hamas ho toy ny fiarovan-tenany ny ankizy kely. Izay toa milaza hoe tsy mampaninona ny midaroka baomba amin'izy ireo? #Gaza #Israel
Ay notohizany hoe:
@iyad_elbaghdadi: Raha te hahita fampihorohoroana ianao, ity no fampihorohoroana. Midaroka baomba amin'ny tranom-pianakaviana feno ankizy mba hamono olona iray. #Gaza #Israel
Nandritra izany, Rob Maquire, avy ao Vancouver, Kanada, niresaka momba ny famoaham-baovao iray izay nanova ny lohatenin'ny tantara tao Gaza:
@RobMaquire: Manontany tena aho, nahoana no novain'ny @CBCNews haingana hoe “miha-mitombo ny isan'ireo namoy ny ainy ao Gaza” ilay lohateniny hoe “ankizy novonoina ary namoy ny ainy”. Tsy mampa-azo aina ve ny tena zava-misy?